नाटकमा एक किसिमको ‘थ्रिल’ हुँदोरहेछ : स्वस्तिमा खड्का – Nepal Headlines: Highlighted news from all over the world.
नाटकमा एक किसिमको ‘थ्रिल’ हुँदोरहेछ : स्वस्तिमा खड्का
२०७७ माघ १७ गते १४:२८
काठमाडौँ — १५ वर्षअघि प्रकाशित आख्यान ‘पल्पसा क्याफे’ माथि नाटक बन्ने भएको छ । पत्रकार नारायण वाग्लेको पुस्तकलाई लिएर रंगकर्मी विमल सुवेदीले नाटक निर्देशन गर्दैछन् । सुरज सुवेदीले नाट्य रुपान्तरण गरेको नाटकमा पल्पसाको भूमिका निभाउँदैछिन् अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का । ‘बुलबुल’बाट अभिनयको तारिफसँगै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रय अवार्ड बटुलेकी स्वस्तिमाको यो डेब्यु नाटक हो ।
बारुद र प्रेमका विषय समेटिएको आख्यानमाथिको नाटकमा उनको चरित्र र वर्कशपका भोगाइ लगायतका विषयमा स्वस्तिमा
जब म इन्डस्ट्रीमा आएँ । थिएटरमा लाइभ नाटक हेर्न पाइन्छ, अभिनय कक्षा हुन्छ, अभिनय सिकाइन्छ भन्ने नै थाहा थिएन । कम उमेरमै फिल्म गरेकी हुँ मैले । पहिलो फिल्म ‘होस्टेल रिटर्न्स’का निर्देशक निर्माताले मलाई मण्डला र शिल्पी थिएटरमा नाटक देखाउन लग्नुभयो । त्यहीबेला नाटकमा लाइभ अभिनय हुँदो रहेछ भन्ने देखें । त्यो हेर्दा नै मैले नाटक गरें भने कस्तो देखिन्छ होला भन्ने हुन्थ्यो । त्यो समयदेखि थिएटरको कलाकार देखेपछि धेरै ज्ञान भएको कलाकार भन्ने अनुभव भयो । थिएटरका कलाकारलाई अर्कै तरिकाले हेर्छौं हामी । मैले थिएटर गरें भने अर्को कुरा सिकेर फिल्ममा ‘इन्पुट’ दिन पाउँछु कि, दर्शकले मेरो अभिनयलाई लाइभ हेर्दाको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराले नै एकपटक अनुभव गरी हेरौं न भन्ने थियो ।
सँग कान्तिपुरकर्मी रीना मोक्तानले गरेको कुराकानी :
‘पल्पसा क्याफे’ लकडाउनमा आएको प्रस्ताव होइन ?
हो । दोस्रो लकडाउनको समयपछि पत्रकार गोकर्ण गौतमले ‘थिएटर गर्न मन छ ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो । मलाई एकदमै मन थियो । उहाँले पल्पसा क्याफेको कुरा गर्नु भएपछि झनै मलाई चाख लाग्यो । सानो भूमिका भए पनि गर्छु भन्ने थियो । सानो भूमिकामा भए पनि थिएटरमा एकचोटी प्रस्तुति दिएर दर्शक प्रतिक्रिया लिने मन थियो । मलाई भयंकर ‘प्रोटागोनिस्ट’को भूमिका चाहिएको थिएन । अनुभव मात्र लिन चाहन्थें । त्यसपछि रंगकर्मी विमल सुवेदीसँग भेट भयो । तीन पटकको भेटपछि अडिसन दिएँ । अनौपचारिक अडिसनपछि नाटकको काम सुरु भयो ।
एक किसिमको ‘थ्रlल’ हुँदो रहेछ । नाटकमा एउटा डायलग बिर्सें भनेँ अन्य कलाकारलाई गाह्रो भइदिन्छ । तर नाटकमा सहकलाकारसँगको अभिनय सम्बन्ध राम्रो भइदियो भने एकदम राम्रो हुने रहेछ । अब फिल्ममा सबै सहकलाकारसँग राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । सानो–सानो दृश्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा झुरै सम्बन्ध भए पनि मतलब हुँदैन । तर थिएटरमा धेरै बोन्डिङ हुनुपर्ने रहेछ । त्यही कुरा मलाई रोमाञ्चक लाग्यो । भोलि दर्शकले नाटक हेर्दा पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु– बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा महान्यायाधिवक्ता असहमत